Usebenzisa njani idatha yeThengi yoMthengi onokuyisebenzisa isiCwangciso seNtengiso ku-2019 | Martech Zone
Usebenzisa njani idatha yeThengi loMthengi unokufumana isiCwangciso seNtengiso ku-2019
NgoLwesihlanu, Februwari 1, 2019 NgeCawa, ngoFebruwari 3, 2019 UJilian Woods
Kubonakala kungakholeki ukuba, ngo-2019, iinkampani ezininzi azisebenzisi idatha yeenjongo ukuqhuba amanyathelo abo okuthengisa kunye nentengiso. Inyani yokuba bambalwa abakhe bemba nzulu ukufumanisa ezona zikhokelo zibalaseleyo zibeka wena kunye nenkampani yakho kwisigqibo esigqibeleleyo.
Namhlanje, singathanda ukujonga uninzi lwemiba ye idatha yeenjongo kunye nento enokuyenza kwintengiso kunye neendlela zokuthengisa ezizayo. Siza kuvavanya zonke ezi zinto zilandelayo:
Yintoni idatha yedatha kunye nendlela efunyanwa ngayo
Isebenza njani idatha yedatha
Ukulungelelaniswa kunye nentsebenziswano phakathi kwentengiso kunye nentengiso
Izinto eziluncedo kukhuphiswano
Yintoni idatha yedatha?
Umthombo wesithombe: https://www.slideshare.net/infer/what-is-intent-data
Ngendlela elula, idatha yedatha ibonisa xa ithemba elithile libonisa indlela yokuziphatha kwi-Intanethi ebonisa injongo yokuthenga. Icacisa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo: idatha yangaphakathi kunye nedatha yangaphandle.
Imizekelo emibini eqhelekileyo yedatha yenjongo yangaphakathi yile
Ifom yoqhakamshelwano lwewebhusayithi yakho: Umntu owenza unxibelelwano unxibelelana nenjongo ngokufuna ukwazi ngakumbi malunga nenkampani, iinkonzo zayo, njl.
Idatha yabathengi basekhaya: Idatha eqokelelwe malunga nabathengi balapha ngeCRM okanye amanye amaqonga entengiso abaluleke kakhulu xa uzama ukuqonda injongo. Idatha isetyenziswa ngamaqela entengiso ukugxila kubakhokeli abasondela kufutshane nokwenza isigqibo sokuthenga.
Idatha yeenjongo zangaphandle iqokelelwa ngababoneleli benkampani yesithathu kwaye isebenzisa idatha enkulu ukuqokelela ulwazi olufutshane ngakumbi. Iqokelelwa ngokwicookies ekwabelwana ngazo kwaye ikhatyiwe kwinqanaba le-IP. Le datha yimveliso yezigidi zokundwendwela amaphepha athile kumakhulu amawaka eewebhusayithi.
Olu hlobo lwedatha lubonelela ngolwazi oluthe ngqo, oluchanekileyo malunga nenani elingenasiphelo leemetriki. Nantsi imizekelo embalwa:
Inani lamaxesha uxwebhu oluthile, ifayile, okanye iiasethi zedijithali ezikhutshelweyo
Inani lamaxesha evidiyo ebonwayo
Bangaphi abantu abacofe emva kokufunda umnxeba wokuthatha amanyathelo kwiphepha lokufika
Amanani aphambili okuphanda
Idatha yeNjongo ifumaneka njani?
Umthombo wesithombe: https://idio.ai/resources/article/what-is-intent-data/
Idatha yeenjongo ihlanganiswe ngabathengisi abaqokelela idatha kwiiwebhusayithi zeB2B kunye nabapapashi bomxholo, bonke abayinxalenye yefayile ye- Ukwabelana kwedatha ngokubambisana. Ngokuqinisekileyo, umbono wokwazi ukuba zeziphi iisayithi umntu azindwendwelayo, imigaqo abayikhangelayo, kunye neempawu abazisebenzisayo zinokubonakala ngathi ziyinto embi ebusweni, kodwa ayisiyiyo kwaphela. Idatha iyaqokelelwa kwaye igcinelwe le njongo, emva koko kwabelwane ngayo (okanye kuthengiselwe) abathengisi kunye nabathengisi. Inkampani yokubhala, umzekelo, ingathatha umdla othile kwiinkampani (okanye, kwezinye iimeko, abantu) abangena amagama ophando anje nge “Iinkonzo zokubhala izincoko"Okanye" umbhali wezifundo "kwiiinjini eziphambili zokukhangela kwaye batyelela iindawo ezithengisa ezi ntlobo zeenkonzo ngenjongo yokuthenga.
Idatha iyahlanganiswa kwaye ixelwe ngeveki ubukhulu becala lamatyala. Ngokudityaniswa kweebhiliyoni zophendlo, ukundwendwela indawo, ukhuphelo, ukucofa, ukuguqula, kunye nokuzibandakanya, abathengisi banokubonisa ukusetyenziswa komxholo kunye nokuchonga ukunyuka.
Le vidiyo isuka IBombora Echaza kakuhle le nkqubo:
Isebenza njani idatha yeenjongo?
Umthombo wesithombe: https://gzconsulting.org/2018/08/02/what-is-intent-data/
Izigidi zabantu kwihlabathi liphela zisebenzisa i-Intanethi ukukhangela kwizigidi zezihloko kwaye ngamabomu zibandakanya nomxholo othile okwi-intanethi. Uthatha isigqibo sokuba zeziphi iinkcukacha ezibaluleke kakhulu kwaye uqalise ukubeka iliso kuthethathethwano oluthile oluhambelana neendlela ezichongiweyo. Umthengisi ubonelela ngayo yonke into ye-Intel kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho:
Izihloko zeJob zamathemba afanelekileyo
Ubungakanani benkampani kunye nendawo
Amagama kunye nee-URL zeeakhawunti zabathengi ezikhoyo
Amagama kunye nee-URL zeeakhawunti ekujoliswe kuzo
Amagama kunye nee-URLs zabathengisi ngqo
Ii-URLs zempembelelo kumzi-mveliso kunye neziganeko
Ukuphathwa kwezentlalontle kwimpembelelo zeshishini kunye neenkokheli zokucinga
Amagama alula kwaye anzima okukhangela ahambelana neemveliso, iinkonzo, iingxaki / iindawo zentlungu, kunye neziphumo ezinokwenzeka / ezinqwenelekayo
Zonke ezi zinto zingentla zakhiwe kwii-algorithms ezijonga kwaye zenze inqaku lezenzo ezifanelekileyo (ezo zibonisa ukubandakanyeka okungafaniyo phakathi kwezigidi zophando kunye nokuzibandakanya okwenzeka mihla le). Uluhlu oluhlanganisiweyo lwedatha yeenkcukacha ezipheleleyo kubandakanya amagama okuqala kunye namagama okugqibela, iinombolo zefowuni, iidilesi ze-imeyile, amagama enkampani, izihloko zethemba, iindawo, imboni kunye nobukhulu benkampani. Ikwabonisa idatha yedatha echaza amanyathelo abawathathileyo.
Imizekelo yezenzo eziqwalaselweyo zibandakanya ukukhangelwa ngokubanzi, ukubandakanyeka kwendawo yokukhuphisana, ukuzibandakanya kwempembelelo kushishino, kunye nemibuzo enxulumene neziganeko eziphambili zeshishini. Idatha ikwaphula amanyathelo ngeentlobo kunye nezinto ezibangela. Ngamanye amagama, ayibonisi nje into ethembekileyo okanye eyenziwe ngumthengi, kodwa ngoba uyenzile.
Kuyenzeka ukuba iflegi yedatha echonga abathengi abakhoyo, iiakhawunti ezijolise kuzo, kunye nokuphinda izehlo zenjongo ebonisiweyo. Zonke ezi zixa zokuba noluhlu lwabantu bokwenyani abathatha inyathelo lokwenyani lokufunda ngakumbi malunga neentlobo zeemveliso kunye neenkonzo ozithengisayo.
Idatha yeNjongo njengesixhobo sokuLungelelanisa kunye nokuDibana
Ukuthengisa kunye nentengiso bekuhlala kuluhlobo lobudlelwane benzondo. Amaqela okuthengisa afuna izikhokelo ezifanelekileyo ngakumbi ezikulungeleyo ukuthenga. Amaqela entengiso afuna ukubona izikhokelo zakwangoko, ukubandakanyeka kubo, kunye nokubakhulisa de bafikelele kwinqanaba lokulungela.
Zonke ezi zinto zonyusa iziphumo kunye neenjongo zedatha yokufumana kunye nokuthengisa kakhulu. Inika isixhobo esiqhelekileyo sokusebenzisana esidibanisa ukuthengisa kunye nentengiso ngokuthe ngqo, ukukhuthaza intsebenziswano, ukutolika idatha kunye nokucwangcisa iindlela ezifanelekileyo zazo zonke iintlobo zonxibelelwano. Nantsi eminye imizekelo eqhelekileyo yendlela idatha esetyenziswayo ngokubambisana:
Ukufunyanwa kokuthengisa okusebenzayo ngakumbi kukhokelela
Ukuncitshiswa kobuqhetseba kunye nokunyusa ukunyaniseka kwabathengi
Ukudibana okuyimpumelelo neeakhawunti ekujoliswe kuzo
Ukufakwa kwangoko kokwamkelwa kwegama kunye nokusekwa kwexabiso
Ukulandelela imikhwa efanelekileyo
Indawo nganye kwezi ingentla inomdla kuzo zombini intengiso kunye nentengiso. Impumelelo kuzo zonke iqhubela phambili inkampani kwaye ivumela ukuvelisa, ukusebenzisana okunentsingiselo phakathi kwamaqela.
Idatha yeenjongo: Uncedo loKhuphiswano
Sebenzisa idatha yenjongo inezibonelelo ezininzi. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kukukwazi ukunceda ukuthengisa kunye nokuthengisa ukujolisa kwinani labathengi kuwo wonke umbutho. Inkampani enye inakho, kwaye ihlala iyenza, ibandakanya ngaphezulu kwento enye ekujoliswe kuyo okanye umntu ophantsi kophahla olunye. Into ebalulekileyo kwisigqeba esinye okanye inkokeli inokuba-kwaye ihlala ihlukile-kwenye.
Idatha yenjongo inceda abathengisi benze umxholo ngamnye kumntu ngamnye ochaphazelekayo kwinkqubo yokuthenga. Ngamakhulu emibutho esebenzisa iikhrayitheriya ezifanayo kukhangelo lwewebhu, idatha yedatha inceda ukuhambisa ukudalwa komxholo ekujolise kuwo onokwakha iphulo lokuthengisa eliqinileyo neliphumelelayo.
UkuSebenzisa ngokufanelekileyo idatha yeenjongo
Ukunxibelelana ngokuthe ngqo phakathi kwenjongo yomthengi kunye nomxholo wokuqala kunika abathengisi kunye neengcali zentengiso umda omkhulu wokhuphiswano. Ukuze wandise ukuqokelelwa kunye nomgangatho wedatha yenjongo kubalulekile ukuba idatha eqokelelweyo idibanise neendlela ezahlukeneyo zedemografi, zejografi kunye nedatha yeenkcukacha. Ngaphandle kolo nxibelelaniso, kunzima (funda: kufutshane nokungenakwenzeka) ukuqonda ngokupheleleyo ukuba zeziphi iindlela ezithile zokuziphatha ezihambelana neenkcukacha zabathengi ezithile.
Xa ukuqonda injongo yento ethile umthengi isekiwe, zombini ukuthengisa kunye nentengiso zikwizikhundla ezingcono zokwenza umxholo ofanelekileyo, osebenzayo ohamba phambili kwinqanaba ngalinye le Uhambo lomthengi.
Enye yeendlela ezilula zokufumana ulwazi lwedatha ngokufanelekileyo kukuphuhlisa umxholo webhlog, amanqaku ewebhu, kunye nezinye iifom zomxholo obhaliweyo obonisa ukuqonda okucacileyo kwemakethi yakho ekujolise kuyo. Umxholo kufuneka ujongane neengxaki kunye neendawo zentlungu edibene nezinto ezithile ezifunyenwe kwidatha yeenjongo eziqokelelweyo. Ukwenza konke oku sikhundla uphawu lwakho njengegunya kwaye unxibelelana nokukwazi ukuhambisa umxholo okrelekrele, onokuthenjwa, othembekileyo.
Kukwacetyiswa kakhulu ukuba usasaze umxholo wokuqala ngendlela eyandisa ukufikelela. Oku kubandakanya ukuphuhlisa isicwangciso-qhinga sokupapasha kunye nesivumelwano kuyo yonke imixholo ekujoliswe kuyo. Ngamafutshane, phuhlisa kwaye upapashe umxholo obonisa iinjongo zethemba kwaye uqiniseke ukuba ufumana indlela phambi kwabaphulaphuli ekujoliswe kubo.
Isicwangciso sokuvelisa esisebenzayo esisebenzisa ngokufanelekileyo kwaye sisebenzise idatha yedatha sinika ithuba lokuthatha isigqibo kuyo nayiphi na intengiso okanye inyathelo lokuthengisa. Ibeka uphawu lwentengiso ngaphandle kwabakhuphisana nabo abakhulu kwaye inyusa amathuba okuba ekugqibeleni ibonwe njengenkokeli yeshishini.
Yakha iqhinga lokuthengisa ngokuthe ngqo, elingenamthungo elibonisa imiqondiso yeenjongo ezikhutshwe ngamathemba ngalo lonke ixesha lomsebenzi we-Intanethi (ukukhangela, ukutyelelwa kwendawo, ukunxibelelana nabantu abakhuphisana nabo, njl.). Oku akuyi kunceda nje ukuvelisa izikhokelo ezingcono, kuya kuba nefuthe elihle kumgca wakho ophantsi. Ukudityaniswa kwedatha yeenjongo kuya kunceda ukwenza imikhankaso yentengiso yexesha elizayo iphumelele ngakumbi, ivumela iqela lakho lokuthengisa ukuba ligxile ngakumbi kwiiakhawunti ezinokuthi zithengwe.
tags: umhlaba wokuthengisa
UJilian Woods yintatheli ezizimeleyo kunye nombhali onegalelo onamava angaphezulu kweminyaka emibini yokubhala. Njengombhali, uyayibona injongo yakhe yokuvelisa kunye nokwabelana ngomxholo ofanelekileyo nabantu abazimisele ukufunda into entsha. Ngaphandle komsebenzi wakhe wosuku, unokufumana uJilian esenza umsebenzi wokuvolontiya okanye weyoga.
Uyilo lwe-UX kunye ne-SEO: Zisebenza njani ezi zinto zimbini zeWebhusayithi kunye kwiNzuzo yakho
Uyiqala njani indawo yeWordPress eyenzelwe uPhando